Dambii ittiin bulmaata a/seeraa – oromialawyers
April 15, 2017 oromialawyers
Dambii ittiin bulmaata a/seeraa
Dambii Ittiin Bulmaata Abbootii Seeraa fi muudamtoota gumii haala iftoomina fi qaqqabamummaa gabbisuu danda’uun fooyyessuun bu’aa qabeessa waan ta’eef,
Hojiiwwan filannoo fi fo’annoo, jijjiirraa fi guddina sadarkaa giddugaleessatti waalteffamanii jiran gadi busuu fi gahee hoggansi ol’aanaa muudama keessatti qabu akka dabalu taasisuun bulchiinsa humna namaa keenya irra caalaa kan fooyyessuu fi humna namaa gahumsa ol’aanaa qabu gara mana murtiitti fiduuf carraa kan uumu waan ta’eef,
Raawwii filannoo fi fo’annoo akkasumas bulchiinsa misooma humna namaa keessatti aangoo Garee Gumii Godinaa fi manneen murtii jalaa cimsaa deemuun barbaachisaa ta’ee waan argameef,
Dambiin Ittiin Bulmaata Abbaa Seeraa fi Muudamaa Gumii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 1/2001 akka itti aanutti fooyya’eera.
Mata Duree Gabaabaa
Dambiin kun “Dambii Ittiin Bulmaata Abbaa seeraa fi Muudamaa Gumii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyessuuf bahe, danbii Lakk. 2/2006” jedhamee waamamuu ni danda’a.
Dambiin Ittiin Bulmaata Abbaa seeraa fi Muudamaa Gumii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa akka itti aanutti fooyya’eera.
Danbicha keewwata 2 keewwanni xiqaa 14 jecha iyyattoota jedhutti aanee himi “ykn muudamtoota manneen murtii ykn ogeessota seeraa muuxannoo gahaa”, jedhu itti dabalamee fooyya’eera.
Danbicha keewwata 13 keewwata xiqqaa 5 tti aanee “Tumi Danbii kana keewwata keewwata 12 fi keewwata 13 kanaa, pireezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa sababa gahaa fi amansiisaa ta’e irratti hunda’uun hojjettooota manneen murtii naannichaa keessa hojjetan ykn ogeessota biroo ulagaa danbii kana keessatti tumame guutan kamiyyuu adda baasee gumii waliigalaaf dhiheessee sadarkaa mana murtii kamittuu muuchisuu hin daangessu.” Kan jedhu keewwata xiqqaa 6 ta’ee tumameera.
Danbicha keessatti keewwanni 20 akka itti aanutti fooyya’eera:
Fo’annoo fi filannoon guddina sadarkaa abbootii seeraa ykn muudamtoota Gumii mana murtii waliigalaa, koreen kan gaggeeffamu ta’ee Gumii waliigalaan mirkanaa’a.
Filannoo fi fo’annoon akkasumas Guddina sadarkaa mana murtii ol’aanaa fi aanaatti tahu Garee Gumii Godinaan kan gaggeeffamu ta’ee koreen yaada murtii Garee Gumii Godinaa irratti hunda’uun yaada murtii dhumaa Gumii waliigalaaf ni dhiheessa.
Danbicha keewwata 25 keewwata xiqqaa 2 jalatti jecha Gumiin jedhutti aanee jechi “ykn Gareen Gumii” jedhu itti dabalamee fooyya’eera.
Danbicha keewwata 25 keewwata xiqqaa 6 tti aanee keewwanni “Keewwata kana keewwata xiqqaa 5 fi 6 jalatti kan tumame akkuma jirutti ta’ee jijjiirraan ofisaroota seeraa mana murtii ol’aanaa fi aanaa godinaa godinatti gaggeeffamu fedha godinaalee lammani fi murtii Garee Gumii Godinaa jijjiirraan fudhatuun ta’a”. Kan jedhu keewwata xiqqaa 7 ta’ee tumameera.
Danbicha keewwata 25 keewwata xiqqaa 7 tti aanee keewwanni, “Keewwata kana keewwata xiqqaa 7 jalatti kan tumame akkuma jirutti ta’ee manni murtii kamiyyuu jijjiirraa keessaa erga raawwate booda jijjiirraa alaa manneen murtii naannichaa kam keessaayyuu haala hirmaachisuu danda’uun beeksifni bahee utuu hin dorgomamne jijjiirraan ofisaroota seeraa godinarra godinatti raawwatamuu hin danda’u.” kan jedhu keewwata xiqqaa 8 ta’ee tumameera.
Danbicha keewwata 25 keewwata xiqqaa 8 tti aanee keewwanni “Komiin raawwii tuma keewwata kana keewwata xiqqaa 7 fi 8 ilaalchisee ka’u yoo jiraate iyyannoo waajira gumiitti dhihaatuun hoggansa ol’aanaa Mana murtii waliigalaan sirreeffamuu danda’a.” Kan jedhu keewwata xiqqaa 9 ta’ee tumameera.
Danbicha keessatti keewwanni 53 akka itti aanutti fooyya’eera:
Abbaa seeraa ykn muudamaan Gumii hojii gadi lakkisuu barbaade, ji’a lamaan dura pireezidaantii barreeffamaan beeksisuu qaba.
Pireezidaantiin gaaffiin hojii gadi lakkisuu erga isaaf dhiyaate booda akkuma haala isaatti yeroo baatii lamaa eeguuf otuu hin dirqamiin hojiirraa gaggeessuu ni danda’a.
Kan keewwta kana keewwata xiqqaa 1 fi 2 jalatti tumame jiraatus ofisarri seeraa mana murtii ol’aanaa fi mana murtii aanaa beeksisa hojii gadilakkisuu pireezidaantii mana murtii ol’aanaatti dhiheeffachuun kan keessummeeffamu ta’a.
Danbicha keewwata 54 keewwata xiqqaa 2 tti aanee keewwanni “Kan keewwta kana keewwata xiqqaa 1 fi 2 jalatti tumame akkuma jirutti ta’ee ofisarri seeraa mana murtii ol’aanaa fi mana murtii aanaa murtii garee gumii godinatiin kan keessummeeffamu ta’a”. jedhu keewwata xiqqaa 3 ta’ee tumameera
Danbicha keewwata 57 keewwata xiqqaa 3 tti aanee keewwanni “Muuxannoon kennamu kiliiraansii kan hin dabalanne yoo ta’e mana murtii ragaa gutuu muuxannoo gaafataa qabu kamittuu kennamuu ni danda’a”. jedhu keewwata xiqqaa 4 ta’ee tumameera
Danbicha keewwata 57 keewwata xiqqaa 4 tti aanee keewwanni “Kan keewwata kana keewwata xiqqaa 4 jalatti tumame akkuma jirutti ta’ee muuxanoon gaafatamu kiliiraansii ni dabalata yoo ta’e mana murtii waliigalaatu keessummeessa”. Jedhu keewwata xiqqaa 5 ta’ee tumameera.
Danbicha keewwata 57 keewwata xiqqaa 5 tti aanee keewwanni “Kan keewwata kana keewwata xiqqaa 5 jalatti tumame akkuma jirutti ta’ee ofisara seeraa sababa badii naamusatiin hojirra gaggeeffamu yoo ta’e malee muuxannoo fi kiliraansiin ofisara seeraa mana murtii aanaa fi ol’aanaan gaafatamu karaa mana murtii ol’aanaa kan keessummeeffamu ta’a.” jedhu keewwata xiqqaa 6 ta’ee tumameera.
Danbicha keewwata 58 keewwata xiqqaa 5 tti aanee keewwanni “Ragaa sobaan dhihaate irratti hunda’uun Mindaan ykn faayidaan kaffalame yoo jiraate akka deebi’u ni taasifama.” Jedhu keewwata xiqqaa 6 ta’ee tumameera.
Yeroo Dambichi Hojii Irra Oolu
Dambiin kun Onkoloolessa guyyaa 13, bara 2006 irraa eegalee hojiirra kan oolu ta’a
Pireezidaantii Mana Murtii Waliigala Oromiyaa
Onkoloolessa bultii 13, Bara 2006
Previous Lawyers jockes
Next Dhadhaa akkana ta’e